Kungani ikhamera yelanga ilungele ukusetshenziswa kwangaphandle?
Wonke umuntu uyazi ukuthi amandla elanga angamandla amasha angenakuguqukayo, ahlanzekile nemvelo. Uma ukuqapha kufanele kufakwe enkundleni yangaphandle ...
Wonke umuntuuyazi leyo solaramandlakuyinto engapheli,Amandla amasha ahlanzekile nemvelo. Uma ukuqapha kufanele kufakwe ngaphakathingembaba Inkambu, ngokuvamile akukho ukuhanjiswa kwamandla okujwayelekile futhi okuzinzile. Bi-easen indawo yokufaka yangaphandle igcwele kakhulu, tImvelo inokhahlo, ngakho kulezi zinsuku,ukhalaikhamera kuvame ukusetshenziselwa ukuqapha kwangaphandle.Khona- kwenzeka kanjani lokhuUhlelo lokuqapha lwe-solar wabona?
Namuhla sizoqonda kahle umgomo wokusebenza weUhlelo lokuqapha lwe-solar.-Kuthile Umgomo Wokusebenza uwukuguqula amandla okukhanya kwelanga kube amandla kagesi, ukuze ungakuguqula kanjani? Okokuqala, kudingeka amaphaneli elanga. Umsebenzi wayo ukuguqula ngokuqondile amandla emisebe yelanga ibe ngamanje yamanje ukuze isetshenziswe ngemithwalo noma egcinwe kumabhethri ukuze uthole isipele. Ngasikhathi sinye, futhi kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kuUhlelo lokuphehla lwamandla elanga. Umthamo wokukhipha amandla we-aiphaneli yelangaihlobene kakhulu nosayizi wendawo yayo. Kukhulu le ndawo, kukhudlwana amandla okuphuma ngaphansi kwezimo ezifanayo zokukhanyisa. Ngokuvamile kwakhiwa amaseli elanga, ifreyimu yemodyuli, ingilazi efihlwe, izinto zokupakisha namabhokisi okusebenza, njll.
Ai-bout icala lelanga nelokukhishwa, njengedivayisi yokulawula ephakathi, ivuliweIsandla esisodwa sigcina amandla kagesi aguqulwe yizakhi ze-solar cell ephaketheni lebhethri, ngakolunye uhlangothiyonaIlawula iphakethe lebhethri ukuze anikeze amandla emishini yokulayisha. Icala lokukhokhisa amalanga kanye nokukhishwa linganikeza ukushaja okungcono kwamanje kanye ne-voltage yebhethri. IngakwaziShaja ibhethri ngokushesha, kahle, futhi ngempumelelo, ukunciphisa ukulahleka ngesikhathi senqubo yokushaja, futhi kunwebe impilo yebhethri ngangokunokwenzeka; Ngasikhathi sinye, kuvikela ibhethri ekungeneni ngokweqile nasekunciphiseni ngokweqile.
Ngokusho kwesidingo samandla semishini yohlelo, ingakhipha ama-voltages ahlukile ukuze ahlangabezane nezidingo zokuhlinzekwa kwamandla kwemishini ehlukahlukene. Uhlelo lusebenza ngokuthembekile futhi ngokuqinile, futhi luhlangabeze izimo ezahlukahlukene ezinzima zangaphandle ezisebenzayo.
Ngakho-ke, kuphiukhalaikhamerakusetshenziswa ngokuvamile? Njengamanje, isetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni ezingaphandle nasemadolobheni lapho i-wiring ingaphazamisi, njengokuthi: izindawo zokwakha, izindawo zokugcina, amahlathi, ukuvikela umlilo kwamahlathi, iziqhingi, ukuzivikela komngcele, njalonjalo. Cishe zonke izimo ezinokhahlo.
Iningi leukhalaikhamera Emakethe manjesebenzisa4G amakhamera ahlanganisiwe wenethiwekhi, okungafakwa ngqo emakhadini we-4G Traffic of Network opharetha ukwenza ukuqapha kwangempela kwesayithi, okwenza ukusetshenziswa kokuqapha okujwayelekile emakethe ukuze kwakhiwe kanzima futhi akukho ndawo kagesi .Kulungele ukusetshenziswa, kungakhawulwanga ibanga, inqobo nje uma kunenethiwekhi, ungabuka ngesikhathi sangempela, okubuye kube yintuthuko enkulu kwezobuchwepheshe.
Abantu babale isixazululo sekhamera ukusiza ukuphatha ukudideka komphakathi ekwakheni kwakho komphakathi OLANDELAYO